Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah - Nidaamka Baradhada
Joornaalka Nidaamka baradhada
Cinwaanka websaydhkeena: http://potatosystem.ru/
Waa maxay macluumaadka shakhsiyadeed ee aan ururinno iyo ujeedada laga leeyahay
Haddii booqdaha ka tago faallo ku saabsan goobta, waxaan ku soo aruurineynaa macluumaadka ku qoran foomka faallooyinka, iyo sidoo kale cinwaanka IP-ka ee booqdaha iyo xogta wakiilka user browser si loo go'aamiyo spam.
Xarig qarsoodi ah oo laga soo saaray cinwaanka iimaylkaaga ("hash") ayaa la siin karaa adeegga Gravatar si loo ogaado haddii aad isticmaaleyso iyo in kale. Qaanuunka arrimaha gaarka ah ee Gravatar ayaa laga heli karaa halkan: https://automattic.com/privacy/. Marka faallooyinkaaga la oggolaado, sawirkaaga muuqaalka ah ayaa si guud looga arki doonaa macnaha guud ee faalladaada.
Haddii aad tahay qof diiwan gashan oo sawir ku daabacaya goobta, waa inaad ka fogaataa inaad ku dhajiso sawirada leh metadata, maxaa yeelay waxay ku jiri karaan xogta goobta GPS. Booqdayaasha waxay soo saari karaan macluumaadkan iyagoo soo dajinaya sawirrada goobta.
Haddii aad ka tagto faallo ku saabsan boggayaga internetka, waxaad awood u siin kartaa kaydinta magacaaga, cinwaanka emailka iyo bogga internetka. Tani waxaa loo qabtaa si sahlan, si aanad u buuxin macluumaadka mar kale marka dib-u-faallo bixinayso. Kukiyadaas waxaa lagu kaydiyaa hal sano.
Haddii aad koonto ku leedahay bogga oo aad gashid, waxaanu samayn doonaa qadar ku meel gaar ah si loo go'aamiyo haddii uu shabakaddaada ku taageerayo "cookies", cookie ma leh wax macluumaad shakhsi ah oo la tirtiro markaad xireyso biraawsarkaaga.
Markaad gasho koontadaada, waxaan sidoo kale dejineynaa dhowr cookies oo leh faahfaahinta soo galida iyo dejimaha shaashadda. Kukiyada gelitaanka ayaa lagu kaydiyaa laba maalmood, cookies oo leh shaashado shaashadeed - muddo sannad ah. Haddii aad dooratid ikhtiyaarka "I Xusuusnow", macluumaadkaaga soo galida waa la keydin doonaa laba toddobaad. Markaad ka baxdo koontadaada, kukiyada galitaanka waa la tirtiri doonaa.
Marka aad daabacdo ama daabacato maqaal ka mid ah browserka, cookie dheeraad ah ayaa la keydin doonaa, ma laha macluumaadka shakhsiyeed oo ka kooban keliya aqoonsiga diiwaanka aad kudhashay, wuxuu dhacayaa maalinta 1.
Mawduucyada la dhigo ee bogag kale
Maqaallo ku yaal boggaan waxaa ku jiri kara waxyaabo ku jira (tusaale ahaan, fiidiyeyaasha, sawirada, maqaalada, iwm.), Waxyaabaha la midka ah waxay u dhaqmaan sida haddii booqde u tagay meel kale.
Boggan ayaa laga yaabaa inay aruuriyaan macluumaadka adiga kugu saabsan, adeegsadaan buskudyada, hirgeliyaan raad-raac dhinac saddexaad ah oo ay kormeeraan is-dhexgalkaaga waxyaabaha ku jira, oo ay ku jiraan is-dhexgalka raadraaca haddii aad leedahay koonto isla markaana aad gasho goobtaas.
Yaan la wadaageynaa xogtaada
Muddo intee le'eg ayaan ku haynaa xogtaada
Haddii aad ka tagto faallo, faallooyinka laftiisa iyo metadata waxaa lagu kaydiyaa si aan xad lahayn. Tani waxaa loo sameeyaa si loo go'aamiyo loona ansixiyo faallooyinka ku xiga, halkii aad ku geli lahayd safka loogu talagalay.
Isticmaalayaasha leh diiwaangelinta boggayaga, waxaan ku kaydineynaa macluumaadka shakhsiga ah ee ay ku bixiyaan profile. Dhamaan dadka isticmaala waxay arki karaan, u rogi karaan ama tirtiri karaan macluumaadkooda profile marka wakhti kasta (marka laga reebo magaca isticmaalaha). Maamulaha shabakada ayaa sidoo kale arki kara oo bedeli kara macluumaadkan.
Maxay yihiin xuquuqdaada xogtaada?
Haddii aad koonto ku leedahay goobta ama haddii aad ka tagtay faallooyin, waxaad codsan kartaa faylka dhoofinta macluumaadka shakhsi ahaaneed ee aan kuugu kaydinnay adiga, oo ay ku jiraan xogta aad bixisay. Waxaad sidoo kale codsan kartaa in lagaa saaro xogtan, kuma jiraan xogta loo baahan yahay in lagu kaydiyo ujeedooyin maamuleed, sharci ahaan ama ujeedooyin amni.
Faallooyinka isticmaalaha waxaa lagu hubin karaa adeegga gawaarida gawaarida ee automatic ah.
Sida aan u ilaalino xogtaada
Maxaa nidaamyada ka-jabsiga loo oggol yahay
Maxay yihiin qaybaha saddexaad ee aan xogta ka helno
Maxaa go'aano otomaatig ah lagu sameeyaa iyadoo lagu saleynayo xogta isticmaalaha
Shuruudo sheegida sharci ee warshadaha